क्यान्सरको उपचार नेपालमै सम्भव छ । - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
शरीरमा रहेका सेल्स (कोषको) वृद्धि हुने निश्चित दायरा हुन्छ । शरीरका कोषले कस्तो आकार लिने र कतिसम्म वृद्धि हुने भन्ने पनि निश्चित नै हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ कोष अनियन्त्रित रूपमा बढ्दा नियमितभन्दा फरक आकार लिन सक्छन् । यसरी कोषहरू अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भएर शरीरका अंगहरूको आकार–प्रकारमा फेरबदल आयो भने बोलिचालिको भाषामा ट्युमर देखियो भन्ने गरिन्छ । ट्युमर देखिनुलाई क्यान्सर भएको हुन् सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
क्यान्सर अर्थात् अर्बुद रोग मानिसको शरीरमा हुने दीर्घरोगमध्ये एक हो। क्यान्सर सरुवा रोग होइन। यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन। यसकारण क्यान्सर रोगीसँगै बस्दा, खाँदा, हेलमेल गर्दा कुनै संकुचन मान्नुपर्ने अवस्था छैन।
महिलाहरूमा स्तन र पाठेघरको क्यान्सर धेरै देखिन्छ । केही वर्षयता नेपालमा क्यान्सरको रोगीको संख्या निकै बढेको छ । क्यान्सरपीडित महिलामध्ये २१ प्रतिशत महिलालाई ब्रेस्ट क्यान्सर भएको पाइएको छ। पाठेघरको क्यान्सर पनि बढ्दो रुपमा नै छ।
स्तन क्यान्सरको हकमा छाती अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुनु, गाँठो देखिनु, छालाको नियमित रंगमा परिवर्तन आउनु, छालामा नसा देखिनु, स्तनको मुन्टोबाट पानी निस्कनुले क्यान्सरको सम्भावना संकेत गर्छन् । पाठेघरको क्यान्सरको हकमा तल्लो पेट दुख्नु, महिनावारी अनियन्त्रित हुनु, पिसाबमा गडबडी देखिनु जस्ता लक्षणहरु हुन सक्छन्।
क्यान्सरको मुख्य प्रवृत्ति भनेको फैलिनु हो । यो फैलिएर काखी, पेट, गर्धन, मुटु, मस्तिष्क वा फोक्सोसम्म पनि पुग्न सक्छ । तसर्थ स्तनको आकारमा देखिने परिवर्तन वा छातीमा कुनै गाँठो देखिएमा सचेत हुनुपर्छ । यदि यसरी छातीमा देखिएको गाँठो फैलियो, छातीको आकार बढ्यो र त्यसको प्रभाव अन्यत्र पनि पर्यो भने जाँच गराइहाल्नुपर्छ । छातीमा कुनै गाँठो देखियो, तर त्यो गाँठो बढेन वा अन्यत्र फैलिएन भने त्यसलाई क्यान्सर भनिँदैन ।
शरीरमा विवीध प्रकारका ट्युमर देखिन सक्छन् । तर, यसरी देखिने सबै ट्युमर क्यान्सर भने होइनन् ।
आफैँले पनि उपचार गर्न सकिने
क्यान्सर निको नै नहुने रोग भनेर समाजमा चिनिन्छ तर वास्तविकता यो होइन। क्यान्सर शुरूमा पत्ता लगाई उपचार गरे यो रोग निको हुन्छ। एक तिहाइ क्यान्सर रोगी उपचार गरेर बचाउन सकिन्छ भने बाँकी एक तिहाइ क्यान्सर रोगीलाई बाँचुन्जेलसम्म सहज जीवनयापन गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ।
लक्षण देखिएको पहिलो चरणमा आफैँले पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ । स्तन क्यान्सरको हकमा यसलाई ‘सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन’ भनिन्छ ।महिनावारी भएको ७ वा ८ दिनमा महिलाले आफैँ आफ्नो छाती नियाल्न सक्छन् । छातीको आकार, प्रकार र गाँठाबारे आफैँ छामेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्तो विधि हरेक महिलाले एक महिनामा एकपटक अपनाउँदा राम्रो हुन्छ । पाठेघरमा असहज महसुस हुँदा समेत व्यक्ति सतर्क रहनुपर्दछ।
केही समस्या भएको आशंका लागेमा यसपछि अस्पताल गएर जाँच गर्नुपर्छ । जाँचको विधि हो, अल्ट्रासाउन्ड अर्थात् साधारण भिडियो एक्सरे। त्यसपछि एमआरआई गर्नुपर्ने हुन्छ।
यति गर्दा पनि क्यान्सर नै हो भन्ने निश्चित नभएमा ‘फाइन निडल एस्पिरेसन साइटोलोजी (एफएनएसी)’ विधि अपनाइन्छ । सानो सियोले क्यान्सर भएको ठाउँबाट पानी निकाली देखिएका कोषिकाको अध्ययन गरी जाँच गर्न सकिन्छ, जसलाई एफएनएसी भनिन्छ। यो विधिमा छातीमा/ पाठेघरमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धि वा गाँठोमा रहेका कोषलाई सिरिन्जको माध्यमबाट झिकेर जाँच गर्ने गरिन्छ । यो परीक्षणबाट क्यान्सर नै हो भन्ने प्रमाणित भएपछि क्यान्सरको औषधि–उपचार प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।
क्यान्सरका चार चरण :
पहिलो अर्थात् एक नम्बर स्टेज भन्नाले क्यान्सर लागेकोे निश्चित भएको, तर अन्यत्र कतै नफैलिएको अवस्थालाई बुझाउँछ । यो स्टेजमा रहेको क्यान्सर पूर्णतया निको पार्न सकिन्छ ।
दोस्रो अर्थात् दुई नम्बर स्टेज भनेको क्यान्सर देखिएको स्थानबाट थोरै फैलिएको भन्ने बुझाउँछ । दुई नम्बर स्टेजमा रहेको क्यान्सरलाई पनि निको पार्न सकिन्छ ।
तेस्रो अर्थात् तीन नम्बर स्टेज भन्नाले क्यान्सर देखिएको अंग वा भागभन्दा क्यान्सर टाढासम्म फैलिएको अवस्था भन्ने बुझिन्छ । जस्तो, छातीको क्यान्सर गर्धनसम्म पुगेको छ भने यसलाई तेस्रो चरण भनिन्छ ।
चौथो अर्थात् स्टेज चार भन्नाले क्यान्सर देखिएको स्थानबाट धेरै टाढासम्म फैलिएको अवस्थालाई बुझिन्छ । जस्तो, छातीको क्यान्सर लिभर, फोक्सो, मस्तिष्क वा हड्डीसम्म पुगेको छ भने त्यसलाई स्टेज चार भनिन्छ । स्टेज चारमा भने क्यान्सर निको पार्ने सम्भावना कम हुन्छ। बिरामीको सहजताका लागि दुखाइ कम गर्ने औषधि प्रयोग गर्नु नै यो स्टेजको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ ।
क्यान्सरको उपचार गर्दा पनि विभिन्न प्रकारका विधि अपनाइन्छन् ।
अप्रेसन गर्ने :
पहिलो र लोकप्रिय विधि हो- अप्रेसन गर्ने । स्तनमा क्यान्सर देखिएको छ भने केही भाग वा पूरै काटेर फाल्ने गरिन्छ । पाठेघरको क्यान्सरको हकमा पुरै पाठेघरनै फाल्न पनि सकिन्छ।
किमोथेरापी भनेको विशेष प्रकारको औषधि द्वारा क्यान्सरको उपचार गर्ने प्रकृया हो । । यो विधिबाट क्यान्सरको औषधि शरीरमा पठाउने गरिन्छ ।
क्यान्सरको औषधिलाई किमोथेरापी भनिन्छ।आजकल सयौं प्रकारका किमोथेरापी बनेका छन्। केही क्यान्सर किमोथेरापीबाट सजिलै निको हुन्छ भने केहीलाई त्यसले छुँदैन। हरेक किमोका राम्रा र नराम्रा असर हुन्छन् ।
किमोले सामान्यतया कपाल झर्छ, वाकवाकी हुन्छ भन्ने सोचिन्छ । तर, सबैले त्यस्तो गराउँदैनन्।किमोथेरापी कि त खाने गोली औषधि हुन्छ कि त रगतका नशाबाट दिइन्छ। ईन्जेक्सनबाट दिनु पर्ने खण्डमा वार्डमा नर्सले किमोथेरापी मिसाइएको सलाइन लगाइदिने गर्दछन् ।
क्यान्सर रोगको उपचारका निमित्त अर्को महत्वपूर्ण विधि रेडियोथेरापी पनि हो। मेसिनबाट अदृश्य रेडियोधर्मी विकिरणका किरणहरु शरीरभित्र प्रवेश गराई विकिरण ऊर्जाको सुरक्षित प्रयोग गरी क्यान्सरका कोसिकाहरूलाई निस्क्रिय पार्ने प्रविधिलाई रेडियोथेरापी भनिन्छ । जनबोलीको भाषामा रेडियोथेरापी गर्नुलाई ‘सेकाइ’ गर्ने भनेर बुझिन्छ । रेडियोथेरापी गर्दा कुनै तातो या अन्य कुनै किसिमको अनुभव बिरामीलाई हुँदैन ।विश्वमा लामो समयदेखि क्यान्सर रोगको उपचारमा रेडियोथेरापी प्रविधिको प्रयोग, विकास र विस्तार भइरहेको छ । क्यान्सर रोग उपचारको लागि यो एउटा प्रभावकारी विधि हो । यसका निमित्त नेपालमा विभिन्न किसिमका मेसिनहरु उपलब्ध छन् ।
हालै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले समयसापेक्षिक तथा उच्च प्रविधियुक्त रेडिएसनको मेसिन जडान गरेको छ। जसले थोरै समयमा धेरै बिरामीलाई उपचार गर्ने क्षमता राख्दछ। हालै जडान भएको (लिन्याक) मेसिनले गुणस्तरीय उपचार दिनुका साथसाथै सुलभ ढङ्गले बिरामिको खर्चलाई समेत कम गर्दछ। यो मेसिनको साहयताले अब भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा बिरामिले लामो समयसम्न पालो कुर्नु नपर्ने भएकोमा हामी सबैजना खुसी छौं ।
हर्मोन थेरापी :
हर्मोन थेरापी प्रयोग गरेर पनि क्यान्सरको उपचारमा गर्ने गरिन्छ । शरीरमा हुने हर्मोनले क्यान्सर पनि गराउँछ र क्यान्सर निको पनि गराउँछ ।
यस उपचारले तपाईको शरीरमा हार्मोनको मात्रा बदल्छ । हार्मोन रसायनिक हुन्छ जसले तपाईको शरीरलाई स्वभाविक रुपले बनाउँछ । यसले केही कोषहरु वा अंगको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नमा मद्धत गर्छ ।
उपचार विधि लामो :
क्यान्सरको उपचार विधि लामो हुन्छ । सम्पूर्ण उपचार विधि अपनाइसकेपछि बिरामीलाई पहिलो १ वर्षसम्म तीन महिनाको अन्तरालमा जाँच गर्ने गरिन्छ । त्यसपछि ६ महिनाको अन्तरालमा । त्यसपछि १ वर्षको अन्तरालमा जाँच गर्ने गरिन्छ । यो प्रक्रिया ५ देखि १० वर्षसम्म चल्न सक्छ ।
यति सबै उपचार गरिसकेपछि बिरामी कति समय बाँच्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सरदर रुपमा स्टेज १ र २ मा रहेका बिरामी उपचारपछि कम्तीमा ५ देखि १० वर्ष बाँच्न सक्छन् । स्टेज ३ र ४ मा रहेका बिरामी उपचारपछि कम्तीमा १ वर्ष बाँच्छन। (बिरामिको बाँच्ने समयको सवालमा विविध पक्षहरुले फरक पार्न सक्छन्)
क्यान्सर हुनै नदिन के गर्ने ?
क्यान्सर हुनै नदिनका लागि हालसम्म कुनै उपाय पत्ता लागेको छैन । तर, शुरुमै रोग पत्ता लगाएर उपचार गर्न सकिन्छ । जसका लागि सकेसम्म वर्षको दुइपटक नत्र एकपटक चेकजाँच गराउन पर्दछ।
त्यसैगरी सर्भिकल क्यान्सरको हकमा विशेषत: ९-१० वर्षको उमेरमानै hpv भ्याक्सिन लगाएको खण्डमा यो क्यान्सरको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ। राज्यले यसमा विशेषज्ञसँग छलफल गरेर उपयुक्त कदम चलाए यसको न्यूनीकरणमा सहज हुने थियो।
ब्रेस्ट क्यान्सर पुरुषलाई पनि
उपचारका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छैन
क्यान्सरको उपचारकै लागि विदेश नै पुग्नुपर्दैन । क्यान्सरको उपचार नेपालमै सम्भव छ । नेपाल सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि गम्भीर प्रकृतिका रोगमा स्वास्थ्य उपचार कोषमार्फत औषधी उपचारमा छुट र अनुदान दिने गर्छ । म कार्यरत भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा यो सुविधा उपलब्ध छ। यसैगरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भर्खरै नयाँ तथा उच्च गुणस्तरको रेडियोथेरापी मेसिन जडान गरिएको छ। जसबाट सहुलियत ढङ्गले गुणस्तरिय उपचार हुनेमा हामी ढुक्क छौँ। यसको जडानले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालसँग जोडिएका हामी सबैजना उत्साहित छौँ।
(डा. शिबा श्रेष्ठ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको रेडियो अन्कोलोजिस्ट हुन् । )